Imeko yokusebenzisa iWindows 11 kwi-Mac ngeBoot Camp, ihlala ingacacanga | Ndisuka mac
IMicrosoft ibhengeze iWindows 11 kwangoko kulo nyaka. Le nkqubo intsha yokusebenza inezithintelo ezininzi xa kuziwa ekusebenzeni kwi-Mac. Inkampani namhlanje iqinisekisile utshintsho oluthile kwiimfuno ze-CPU ze-Windows 11, kodwa Inkxaso yeMac ihlala ingaqinisekanga. Okwangoku ayaziwa ukuba ngaba uhlobo olutsha lweMicrosoft lunokuqhutywa ngokusesikweni ngeBoot Camp kwiiMacs.
IMicrosoft isungulwe iimfuno ezintathu eziphambili ukulungiselela i-PC ukuqhuba Windows 11:
Ifuna umatshini one Inkqubo ye-64 GHz engama-1 okanye ngokukhawuleza.
Ubuncinci I-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB ukugcinwa.
Ikhompyuter ifuna nekhadi yemizobo ehambelana ngqo ne-DirectX Inkxaso ye-TPM 2.0.
Oku kubangele abasebenzisi abaninzi ukuba bakhalaze ngokuba bathenga iikhompyuter kungekudala kakhulu kwaye bashiyekile kolo hlaziyo. Kodwa okona kubi kuthi, kule meko, kubasebenzisi beMac kukuba inkxaso esemthethweni yeWindows 11 ngeBoot Camp ihlala ingacacanga. Kungenxa yokuba Windows 11 ikwafuna iModyuli yeQonga elithembekileyo (TPM) 2.0, eyi Uluhlu lwezokhuseleko lwakhiwe kwibhodi enengqondo okanye i-firmware yezixhobo.
U-Apple akazange anike inkxaso kumgangatho we-TPM 2.0 kwii-Intel Macs, ezenza zonke zingahambelani nohlobo lwamva nje lweWindows. Ukuba usebenzisa isixhobo esikhutshwe nguMicrosoft ukujonga ukuba iPC yakho inayo izixhobo eziyimfuneko ukuze usebenze Windows 11, uza kufumana umyalezo othi "Awunakho ukuqhuba iWindows 11 kule PC."
Kukho ezinye iindlela esele zifunyenwe ngabasebenzisi: Ukuguqula ezinye iifayile zenkqubo ukugqitha iitsheki ze-2.0. Nangona kunjalo, iMicrosoft ingasusa esi sisombululo.
Into entle ehlala ihleli sinezinye iindlela Kwaye bakhuselekile njengaye usebenzisa Ukufana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Imeko yokusebenzisa iWindows 11 kwiMac ngeBoot Camp, ihlala ingacacanga
I-Chrome beta 94 yongeza iWebGPU API ngenkxaso ye-Metal